Kabeneme 'kudayiswa izindawo zomphakathi' - Ilanga News
Home Izindaba Kabeneme ‘kudayiswa izindawo zomphakathi’
Kabeneme ‘kudayiswa izindawo zomphakathi’
AMALUNGU omphakathi ngaphansi kwesizwe sakwaMpungose, abebhikisha ekhala ngokudliwa nokudayiswa kwezindawo zomphakathi.
BHEKI NDLOVANA noJOHN HLONGWA
LINYAMANAMBANA ibambabukhosi lesizwe saKwaMpungose, Olundi amalungu omphakathi alisola ngokungawuhloniphi futhi athi alibambisene nawo. Osekulidalele amazinyo abushelelezi nakakhulu ibambabukhosi uNkk Ntombizini “Zini” Mpungose kwamanye amalungu omphakathi, yizinsolo zokuthi lona nesigungu salo, badla umhlaba wesizwe, bawudayisela abathile ngezizumbulu. Ngokusho kwamanye amalungu omphakathi akhulume neLANGA, indaba yokusikelwa kwabantu izindawo iyaxaka ngoba athi kawaziswa njengezakhamizi, abona ngomuntu abangamazi esakha.
NgoMsombululo owedlule umphakathi obuqhamuka ezigodini ezahlukene okuyi-Eyihlabeni, iThokoza, iNtendeka, kwaSishwili, iSangoyana naseMtikini obubhikisha, uhambisa incwadi yezikhalo enkantolo yesizwe. Phakathi kwezinto eziseqhulwini ohlwini lwezikhalo, yindaba yokusikwa kweziza okuthiwa zidayiselwa abathile ngezizumbulu. Lokhu kudayiswa kwezindawo umphakathi uthi kunciphisa amadlelo, kugcine sekwenza imfuyo ifudukele ngasemqwaqweni omkhulu bese ishayiswa yizimoto. Umphakathi obubhikisha ufike enkantolo yesizwe kulenga ingidi esangweni, kukhomba ukuthi akukho muntu ngaphakathi ozokwamukela izikhalo zawo.
Ukufika kwawo kukhala ibhu-ngane, kuphakamise imimoya. Uze wahlakazeka umbhikisho kungaveli muntu obezokwamukela incwadi yezikhalo. Amalungu omphakathi achaze ukungaveli kwebamba bukhosi, noma lithumele umuntu obezolimela, njengophawu olucacile lokubukela phansi umphakathi, nokungawunaki. UMnu Vusumuzi Zungu, okhulu-me egameni lomphakathi obubhikisha, uthe inkosi nomkhandlu wayo bebazi ukuthi umphakathi uyeza ngoba ekuqaleni umbhikisho wawuhlelelwe umhla ka-7 kuyo le nyanga kodwa wahlehla. Umphakathi usole umkhandlu ukuthi wenze ngamabomu ukuthi kungabikhona muntu ngoba njalo ngoMsombuluko inkantolo isuke ivuliwe.
UMnu Zungu uthe njengoba ibambabukhosi nomkhandlu walo bengazixakanga ngokuyohlangana nomphakathi, akaboni ukuthi basazophinde bakwazi ukulungisa inkinga ekhona. Uthe sekufanele kungenelele ungqongqoshe woMnyango wezokuBusa ngokuBambisana nobuHoli boMdabu, uMnu Sipho Hlomuka. Echaza ngokubasukumise phansi uthe: “Okusikhathaza kakhulu wukubekwa kwemizi emasimini abantu ngaphandle kokubazisa. Ukubekwa kwabantu emadlelweni lapho kudla khona imfuyo, nasezi-ndaweni ezisuke zihlonzwe njengendawo yamathuna. “Bese kuba wukudayiswa kwezindawo. Siyithatha ngokuthi leyo nto iwubugebengu ngoba izwe ngeleNgonyama.
“Asikholwa wukuthi kwayena uBayede uyakwazi ukuthi umhlaba wakhe uyadayiswa, thina sazi ukuthi kawudayiswa umhlaba kaBayede. Sibona ubugebengu obenziwa wubukhosi bakwaMpungose, ngokuthi buthathe izindawo buzidayise.” “Uhlelo esilwaziyo thina wukuthi kufanele induna iqoqe izakhamizi esigodini, ikhulume nazo (uma kukhona ocela ibala), sibonisane ukuthi makabekwe.
“Njengamanje abantu sebebekwa ngabantu abazibiza ngomkhandlu wenkosi, nawo esingawazi ukuthi uqhamukaphi ngoba abakaze bakhethwe wumphakathi.” Encwadini yezikhalo, umphakathi uthi okuqaphelekayo wukuthi abantu ababekwa ngobuningi, akusibona abendawo, kodwa wona uma ukhonzela amanxiwa kuthiwa akukavumeleki ukubekwa kwabo.
USihlalo weNdlu yamaKhosi KwaZulu-Natal, iNkosi Phathisizwe Chiliza, uthe uyaqala ukuluzwa lolu daba. “Ngiyaqala ukuzwa ngalolu daba kodwa ngizoke ngilulandele, ngizwe ukuthi kuze kudayiswe umhlaba nje, kusuke kwenzenjani. “Ngokosiko lwasemakhaya umhlaba awudayiswa kodwa lowo muntu osuke efuna ukubekwa, uye akhokhe okuncane enkosini okuthiwa yiKhonza Fee, okusuke kuhloswe ngayo ukwenza imisebenzi emincane yasenkantolo. “Kunabantu ababuya nabantu emasontweni lapho bekhonza khona bezobadayisela umhlaba lokho akuvumelekile. “Uma wakhile endaweni usufuna ukuyokwakha kwenye indawo, uye udayise isakhiwo salowo muzi, hhayi umhlaba. Alikho ilungelo lokudayisa umhlaba munye onalelo lungelo, yiSilo qha.” USihlalo weNgonyama Trust Board, uJaji Jerome Ngwenya, uthe akuvumelekile ukudayisa umhlaba. ILANGA lizame kaningana ukuxhumana nebambabukhosi uNkk Mpungose, kodwa wangatholakala ukuba aphawule.
Previous articleUMENGAMELI URAMAPHOSA UKHULEKELE ISILO UMISUZULU
Next articleINHLANSI YETHEMBA NGOWESIFAZANE ODINGA ISIBINDI